Bit By Bit - Running kuedza - 4.2 Ndezvipi kuedza?
Randomized pehurumende kuedza kuva mana makuru zvinhu: muchiuto evakurukuri, randomization kurapwa, hurukuro kurapwa, uye nokuyerwa zvaitika.
Kuongorora kwakagadziriswa kweRandomized kune zvinhu zvina zvakakosha: kuunganidza vatori vechikamu, kurasika kwekurapa, kutora kurapwa, uye kuenzaniswa kwemigumisiro. Zera re digital haritauri zvakakosha zvekuedza, asi zvinoita kuti zvive nyore kunzwisisa. Semuenzaniso, munguva yakapfuura, zvingadaro zvakaoma kuyera maitiro emamiriyoni evanhu, asi izvozvi zvinoitika nguva dzose mumaitiro akawanda ejedi. Vatsvakurudzi vanogona kuverenga nzira yekubatisa mikana iyi mitsva vachakwanisa kuedza miedzo yaisakwanisika kare.
Kuita izvi zvose zvinyorwa zvizere-zvose zvakaramba zvakafanana uye zvakachinjwa-ngatitarisei kuedzwa naMichael Restivo naArnout van de Rijt (2012) . Vaida kunzwisisa zvinokonzera kusarudzwa kwevamwe vezvikwereti pane zvipo zvekuita zvekunyora kune Wikipedia. Kunyanya, vakadzidza migumisiro yemabhenari , mubairo wekuti chero Wikipedian inogona kupa kune umwewo weMuspedian kubvuma basa rakaoma uye nekushingaira. Restivo navan de Rijt vakapa mabarnstars kune zana dzinofanirwa zve Wikipedians. Zvadaro, vakatsvaga zvipo zvekugamuchira zvekupedzisira kune Wikipedia mumazuva 90 anotevera. Zvakawanda zvavakashamiswa nazvo, vanhu avo vavakapa mabhenadhi vaiwanzoita kuchinja mashomanana mushure mekugamuchira imwe. Mune mamwe mazwi, mabarnstars aiita seanoodza moyo pane kukurudzira mupiro.
Nenzira yakanaka, Restivo navan de Rijt vakanga vasina kukwanisa kuongorora "perturb and observe"; ivo vakanga vachimhanya kuongororwa kwakaitwa nemaitiro. Nokudaro, kunze kwekusarudza zana vatatu vanoita kuti vagamuchire barnstar, vakagamuchirawo vatatu vanovabatsira vasiri kupa. Idzi idzi dzakashanda seboka rinodzora. Uye, zvakananga, ndiani aive muboka rekurapa uye aive ari muboka rekutonga ainge akatsunga pasina.
Apo Restivo naVan de Rijt vakatarisa maitiro evanhu vari muboka rekutonga, vakawana kuti mipiro yavo yakanga ichiderera zvakare. Uyezve, apo Restivo uye van de Rijt vakaenzanisa vanhu vari muboka rekurapa (kureva, vakagamuchira mabarnstars) kune vanhu vari muboka rekutungamirira, vakawana kuti vanhu vari muboka rekurapa vakapa zvikamu zvinenge 60 muzana. Mune mamwe mazwi, mipiro yemapoka acho ose akanga ari kunyengera, asi avo veboka rekutonga vakanga vachiita zvakakurumidza kudaro.
Sezvo chidzidzo ichi chichiratidzira, boka rekutonga muzviongorori rakakosha nenzira iyo inenge ichinakidza. Kuti tinyatsoratidzika kuitika kwemabarnstars, Restivo uye van de Rijt vaifanira kutarisa vanhu vasina kugamuchira mabarnstars. Kazhinji, vatsvakurudzi vasingazivi ruzivo vanokundikana kukoshesa kukosha kunoshamisa kweboka rinodzora. Kana Restivo uye van de Rijt vasati vava neboka rekutonga, vangadai vakagumisa zvakashata. Mapoka ekudzora anokosha zvokuti mukuru wekambani yekambani yakataura kuti kune nzira nhatu chete idzo vashandi vanogona kubudiswa kubva kune yekambani yake: kuba, kubata zvepabonde, kana kuti kuedza kuedza pasina boka rekutonga (Schrage 2011) .
Restivo uye van de Rijt's study inoratidzira zvikamu zvina zvakakosha zvekuedza: kubhadhara, randomization, kupindira, nemigumisiro. Pamwe chete, izvozvi zvina zvinobvumira masayendisiti kuendesa mberi kwekubatana uye kuenzana nemagetsi ekurapa. Kunyanya, kurasika kunoreva kuti vanhu vari mukurapa nekutonga mapoka vachafanana. Izvi zvakakosha nokuti zvinoreva kuti chero musiyano pakati pemigumisiro pakati pemapoka acho maviri anogona kuonekwa kune kurapwa uye kwete kushungurudzika.
Mukuwedzera pakuve mufananidzo wakaisvonaka wemichina yekuongororwa, Restivo uye van de Rijt's study inoratidzawo kuti kugadzirwa kwekuedza kwedhigiri kunogona kuve kwakasiyana zvachose neyekuongororwa kweanalogog. MuRetivo uye kuedza kwaVan de Rijt, zvaive nyore kupa barnstar kuna ani zvake, uye zvakanga zvakaoma kutarisisa mhinduro-nhamba yezvigadziriswa-pane nguva yakawedzerwa yenguva (nokuti shanduko yezvakaitika inongororwa zviri nyore ne Wikipedia). Iko kukwanisa kugovera kurapwa uye kuenzanisa zviito pasina mari kunowirirana nenzira yakasiyana nekuenzanisa munguva yakapfuura. Kunyange zvazvo chiitiko ichi chakabatanidza vanhu mazana maviri, zvinogona kunge zvichishanda nevanhu 2 000 kana kunyange 20 000. Chinhu chinonyanya kudzivirira vatsvakurudzi kuwedzera kuedza kwavo nechimwe chezana chakanga chisina mari; yaiva tsika. Izvozvo ndizvo, Restivo uye van de Rijt vakanga vasingadi kupa mabhendi kune vashandi vasina kukodzera, uye vakanga vasingadi kuti kuedza kwavo kuvhiringidze Community Wikipedia (Restivo and Rijt 2012, 2014) . Ini ndichadzoka kune imwe yemafungiro ezvakanaka anokwidzwa nezviedzo gare gare muchitsauko chino uye muchitsauko 6.
Mukupedzisa, kuedza kweRetivo uye van de Rijt zvinoratidza zvakajeka kuti kunyange zvazvo chinangwa chekuedza kuedza chisina kushanduka, kugadziriswa kwemajigiramu emakore anoedza kungave kwakasiyana zvikuru. Zvadaro, kuitira kuti zvinyatsojekesa mikana yakashandiswa nekushandurwa uku, ndichaenzanisa zviongorori izvo vatsvakurudzi vanogona kuita iye zvino nemhando dzeongororo dzakaitwa kare.